Auto sprayer maka oyi ụlọ anwụ nkedo igwe
1. The spraying olu nke modul ịgba isi nwere ike gbanwee iche iche, 3 ụzọ njikwa maka ofu na ibughari ebu.
2. Akpụkpọ ụkwụ edoziri na nke a na-ebugharị nwere ike ịfụ iche.
3. Igwe a nwere ike ịkwụsị n'ọnọdụ ọ bụla na X axes na Y axes maka ịcha na ịfụ.
4. Y axes nke servo moto na-ebugharị, malite na kwụsị ngwa ngwa, na-arụ ọrụ nke ọma na kpomkwem.
5. X axes Na-anya site na moto ihe ntụgharị, nwere ike ibugharị ihe nkwụnye ahụ iji dozie ebu ahụ.
6. Usoro nchịkwa na-anabata Misubishi PLC na ihuenyo mmetụ, nke a pụrụ ịdabere na ya ma dị mfe iji rụọ ọrụ.
7. Na ngosipụta njehie na nkọwa maka mmezi dị mfe.
8. Amass nke ebu technics parameters nwere ike ịzọpụta.
9. Nwere ike na-eso ahịa mkpa hazie n'elu 1000T sprayer.
10. The njikọ mkpara ụdị Ọdịdị na nakweere, na ọ na-chụpụrụ helical gia na worm gia na worm reducer na elu n'ibu ike, ezi nkwụsi ike na ogologo ndụ ọrụ.
11. SIEMENS servo moto, Japan NSK bearings.
12. Ọ nwere ike nọ na njikere steeti na kacha nso ọnọdụ si ịgba mgbe anwụ-nkedo meghere ebelata ịgba oge ọdịda na ukwuu mma ịgba okirikiri.
13. Ọ nwere ọrụ nke imezi ọkpụrụkpụ ebu nke moto iji chekwaa oge, ike, na nchekwa.
14. Ọtụtụ tent nke ebu ịgba mmemme na-atụkwasịkwara na usoro dị ka chọrọ. Maka ndochi nke ebu, enwere ike ịkpọpụta mmemme mbụ echekwara ozugbo site na ngwa igwe maka iji ya eme ihe, na-eme ka ọ dị mfe iji rụọ ọrụ na idobe ya.
15. Igbe njikwa ahụ nwere ọnọdụ echekwara maka mgbaàmà, nke nwere ike jikọta na igwe nkedo anwụ maka arụ ọrụ ọkara na-akpaghị aka ma nwee ike iji igwe nkedo anwụ anwụ na onye na-ewepụta ihe maka ịghọ ngwá ọrụ zuru oke.
16. The mmadụ-igwe interface mmetụ ihuenyo nakweere maka mwube niile parameters mfe. A na-eji arụ ọrụ ngosipụta nrụnye nke onwe onye kpatara ya maka nyocha na nrụzi mmejọ ọzọ.
17. Ọ na-onwem na nozzle-ụdị nozzle set na ezi atomization mmetụta na adaba nnọchi na echichi. Ọ nwere ihe ịgbasa ebe a kapịrị ọnụ, ịgbasa na-ekesa na ihe na-ese n'elu mmiri.
18. Ntugharị na-akpụ akpụ na-edozi nwere ike ịfụ n'otu oge ahụ, a pụkwara ịchịkwa ya iche. Enweghị ịfụ na steeti ịgba na enweghị ịgba na steeti ịfụ.
Enwere ọrụ nke ịrịgo na ịfụfụ iji hichaa unyi dị n'elu ebe a na-akpụ akpụ n'oge ọ na-arịgoro mgbe arụchara ọrụ iji dobe ebe a na-awụ ahụ ọcha.
19. The nozzles na-ewere usoro nchịkwa eriri afo (mmiri na-achịkwa gas), iji chịkwaa n'ụzọ ziri ezi iji gboo mkpa ịgba nke ngwaahịa dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche. Ọzọkwa, njikwa eriri afọ bụ ụzọ njikwa kacha adaba na ọnụ ala dị ala maka ndozi na nhicha nke akụrụngwa. The ojiji nke mpụga mbuaha spraying nwere ike hụ na atomization nwere ike mechie na nozulu na njedebe nke spraying maka onye ọ bụla ebu, si otú a ukwuu mbenata usoro onunu ogwu nke ntọhapụ gị n'ụlọnga nakwa dị ka ihe fọdụrụ na imeziwanye mmepụta gburugburu ebe obibi na anwụ nkedo. igwe. Nozzle ọ bụla nwere ike na-afụ ikuku n'oge na-adịghị anya iji mee ka evaporation nke mmiri mee ngwa ngwa na igbochi nozzles ka mmiri ghara ịdaba, si otú a na-ebelata mmiri fọdụrụnụ; mgbe spraying, ike ikuku ịfụ sekit na nrụgide nwere ike guzobe onwe ya nwere ike n'ihu ịfụpụ mmiri mmiri na mba ọzọ.
Nke gara aga: Auto ladler maka oyi ụlọ anwụ nkedo igwe
Osote: Auto Extractor maka oyi ụlọ anwụ nkedo igwe
Ndepụta nkọwapụta akpaaka
Nkọwa/ihe nlereanya YP-1# YP-2# YP-3#
Igwe ihe nkedo anwụ dabara adaba 125T-200T 250T-400T 450T-600T
Nozzle setịpụ ụdị ịgba mmiri 2 n'ígwé fesa nke ọ bụla maka na-akpụ akpụ ọgwụgwụ ofu ebu,24 spraying ihe 2 n'ígwé fesa nke ọ bụla maka na-akpụ akpụ na ofu ebu,28 spraying ihe 2 n'ígwé sprey ọ bụla maka ịkwaga na ofu ebu,32 spraying ihe
Ọnụọgụ nozzle 12 nozzles, 6 nozzles kwa akụkụ, fọdụrụ 12 nwere okpu 14 nozzles, 7 nozzles kwa akụkụ, fọdụrụ 14 nwere okpu 18 nozzles, 9 nozzles kwa akụkụ, fọdụrụ 14 nwere okpu
Ọkpụkpụ siri ike nke ntọala nozzle (ọla kọpa tube Φ60mm> 12 na-afụ isi, isi isii kwa akụkụ 14 na-afụ isi, 7 isi kwa akụkụ 16 na-afụ isi, 8 isi kwa akụkụ
Otu ntughari njikwa nozzle A na-achịkwa ọkwa ọ bụla, oyi akwa ọ bụla dị ka ngalaba njikwa, mkpokọta 4 nkeji
Na-ebuli njem strok 650mm 800mm 1100mm
Isi njem strok 250mm 250mm 400mm
Na-ebuli ike moto 3.0KW 3.0KW 2.0KW
Ike ọkọnọ ike 380V / 0.5KVA 380V / 0.5KVA 380V / 0.8KVA
Oge cylce 5 sekọnd 5 sekọnd 6 sekọnd
Ngosipụta nkọwapụta 850*700*1290mm 850*700*1400mm 1000*700*1590mm
Ibu nke Igwe 280KG 300KG 330KG
Anyị na-enye ọ bụghị nanị na-anwụ anwụ nkedo igwe, kamakwa a zuru ezu set nke akpaaka ngwọta.Our die-nkedo automation na-eji n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, zuru akpaka mmepụta ihe izute chọrọ nke pụrụ iche ọnọdụ, melite nchekwa larịị, melite mmepụta arụmọrụ, belata ọrụ. akwụ ụgwọ. Ọ na-agụnyekarị akpaaka ladler, auto sprayer, auto extractor, sprayer robot, robot extractor, hydraulic trimming press, release agent auto mixer, akpaka mmiri na-asachapụ, ihe ọkụ beads, plunger mmanụ lubricating igwe, ebu belt, wdg.
Igwe na-efesa akpaaka